Ikalamavony Mpitsabo 36 misahana olona 15.700
Misedra olana ireo mponina any amin’ny distrikan’Ikalamavony amin’izao, 100 km miala ao Fianarantsoa.
Tsy ampy fitaovana mantsy ny CSB II ao an-toerana no sady tsy ampy ihany koa ireo mpitsabo hany ka tsy voaray an-tanana ara-dalàna ireo marary. Mahatratra 600.000 Ar anefa no hanofana fiara iray avy ao Ikalamavony mankany Fianarantsoa mba hitondrana marary. Mahatsiaro ho sahirana ireo reny miandry vohoka noho izany ankoatra ireo marary mila fandidiana maika. Hetahetan’ny mponina any an-toerana ny mba hamatsiana toeram-pandidiana azy ireo. Toraka izany ihany koa ny fampitomboana ny isan’ny mpitsabo izay 36 monja misahana mponina 15.700 mahery. Tsiahivina moa fa ankoatra ny aretina tazo dia misy ilay aretina antsoina hoe : hemorragie digestive ihany koa no mamely ny mponina any an-toerana amin’izao. Aretina any amin’ny lalan-kanina any izy ity. Tsy mandeha any amin’ireo taova tokony alehany ny sakafo rehefa hanina raha toraka izay ihany koa ny maloto ka mety liana fandidiana ihany koa.